Wafdi ka socda dowladda iyo Saraakiil cadaan ah oo manta soo gaarey Baydhabo | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Wafdi ka socda dowladda iyo Saraakiil cadaan ah oo manta soo gaarey...
Wafdi ka socda dowladda iyo Saraakiil cadaan ah oo manta soo gaarey Baydhabo
Wafdi ka socda Wasaaradda Gaashaandhigga Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Saraakiil Maraykan ah ayaa maanta soo gaaray magaalada Baydhaba ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya.
Wafdigan ayaa waxaa garoonka Diyaaradaha ee magaalada Baydhaba ku soo dhaweeyay Saraakiil ka tirsan qaybta 60-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo uu hor kacayay abaanduulaha qaybta, Ismaaciil Khalliif Shire.
Xubnahan ka socda Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya iyo Maraykanka ayaa kulan la qaatay saraakiisha qaybta 60-aad, iyagoo ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa howl-gallada lagu sugayo ammaanka dalka iyo sidii loo furi lahaa wadooyinka qaar oo ay jareen Shabaab.
Abaanduulaha qaybta 60-aad Ismaaciil Khalliif Shire ayaa sheegay inay wafdigani ka wada hadleen sidii ay u ogaan lahaayeen qaab dagaaleedka qaybta iyo waxa uu Ciidanku u baahan yahay, si loogu gudbiyo madaxda iyaga ka sarreysa, iyagoo booqasho tan la mid ahna ugu tegi doona Ciidamada degmada Buur-hakaba oo isugu jira SNA iyo K/Galbeed.
“Qaybta ayay ugu socdaan qaab dagaaleedkeeda iyo waxa aan u baahan nahay qayb ahaan, si ay ugu gudbiyaan madaxda iyaga ka sarreysay, waxaa u dhinnaa Buur-hakaba, ciidamadaasna waxay isugu jiraan SNA iyo K/Galbeed”. Ayuu yiri Abaanduule Ismaaciil Khalliif.
Abaanduulaha ayaa intaa ku daray inay Ciidamada wada jira ku howlan yihiin diyaar garoow dagaal, iyagoo ku wajahan Tuulooyin ka tirsan Gobolka Baay oo ay ku sugan yihiin Shabaab, si aanay u dhicin hakad ku yimaada isu socodka dadweynaha.
Waa markii Labaad ee ay magaalada Baydhabo ay soo gaaraan wufuudan ka socota Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya iyo Dowladda Maraykanka, iyadoo uu qorshuhuna yahay tayaynta Ciidamada Soomaaliyeed ee halkaa ka howlgala.